Rasaasa News – Atoobiya: Shidaalka oo Yaraaday oo Qiimihiisu Kacay
on January 8, 2015 12:00 am
Jijiga, Jan 8, 2015 – Shidaalka ayaa gabaabsi ku ah dalka Atoobiya meelaha qaar, taas oo sababtay in qiimaha shidaalku cirka galo, xili dunida qaar ka cabanayso qiima dhaca ku yimid shidaalka oo ay ugu wacantahay korodka soo saaristiisa [$50 a barell]. Magaalooyinka waawayn ee bariga iyo koonfurta Atoobiya ayey gaadiidku safaf dhaadheer ugu jiraan kaalimaha shidaalka, halkaas oo ay askartu ka qaybqaadanayso qaybinta shidaalka.
Gaadiidka dadwaynuhu isticmaalaan [Bajaajka iyo Basaska] ayaa ku dhaxa habeenkii safafka, waxaana la siiyaa toban ilaa labaatan Litre [10-20]. Waxay arintani saamaysay qiimaha lagu raaco gaadiidka dadwaynaha oo kacay.
Qimaha shidaalka ayaa Litirka Naaftadu ahaa 16Bir todobaad gudihii ayuu gaadhay 19Birr kaalimaha shidaalka, Baasiinka 19Birr isna wuxuu gaadhay 22Birr. Suuqa madow wuxuu qiimuhu gaadhayaa 22Birr Litirka Naaftada ah, Baasiinkana 25Birr.
Magaala Jijiga Kaalimaha shidaalka waxaa ku xidhan xadhko, si uusan gaadidku u soo galin, maadaama ay shidaal yari jirto, waxaana shidaalka la bixiyaa habeenkii. Jijiga kama jiraan safaf dhaadheer kaalimaha shidaalka, inta badana dadku shidaalka waxay ka iibsadaan suuqa madow.
Lama garanayo waxa sababay shidaal yarida, xili ay korodhay tirada shidaalku, qiimihiisuna hoos uga dhacay dunida. Waxaase loo malaynayaa in ay dawladu ka dambayso yaraanta shidaalka una kaydinayso xiliga lagu jiro doorashada.
Sii socoshada shidaal yaridani, waxay saamayn qiimayaasha badeecooyinka iyo guud ahaan nolosha dadwaynaha, taas oo xisbiyada mucaaradka u noqon karta furaha dhaleecaynta iyo kicinta dadwaynaha.